Traditional Zulu Dance – The Ulwazi Programme
Ijadu uhlobo lwengoma noma ukusina olwenziwa uma kunomcimbi wesintu ekhaya ikakhulukazi, umcimbi othinta idlozi okungaba umemulo, umsebenzi wokubuyisa umnumzane wekhaya osewashona noma umshado. Ijadu luwuhlobo lwengoma engasheshi uma isinwa futhi namaculo akhona awasheshi ngoba lwaqalwa abantu abadala besilisa okwakuthi uma bezinamele kulowomcimbi noma bebonga impatho kulowomuzi abasuke bemenywe kuwo basine.
Uma kuculwa iculo lejadu kufanele lihambisane nalabo abashaya ihlombe bese kuthi labo abasinayo balalelisise iculo kanye nehlombe ukuze bangabhimbi. Isigubhu ke asishaywa uma kusinwa ijadu ngoba sisuke sifune ukugqiba iculo lingabe lisazwakala kahle. Bekuye kuthi uma sebedlile inyama baphuza notshwala besintu bese kucelwa umnumzane womuzi ukuze ambonge ngokubapha ukudla. Kuthathwa isithebe siphakanyiswe bese kuthophwa umnumzane bese kuyaculwa kusinwe ijadu. Ijadu liyasinwa futhi uma kuvaleliswa umnumzane womuzi (engcwatshwa), kuye kuthi uma sekuzophunywa kuyiwe emathuneni bese kuqalwa ngalo lapho ke kusuke kusina abomndeni walapho kushonwe khona.
Imindeni isineculo layo lokusina ijadu elingafani nelomunye umndeni. Lena indlela umndeni okhombisa ngayo ubumbano kanye nenhlalo enhle ikakhulukazi ngoba bayafundisana ukusina kanye nokucula.
Indlela yokusina ijadu
Uma kusinwa ijadu labo abasinayo kufanele bakhe umugqa futhi bangami baqondane nalowo osusayo esasina. Umuntu osusa ijadu kufanele kube umuntu olaziyo futhi ongezobhimba ngoba uma kubhimbe yena kusho ukuthi bonke abantu abamlandelayo bazobhimba. Kunendlela enza ngayo uma esesusa ingoma bese bephakama bonke benze njengoba enzile. Ayikho ke indlela yokugqoka ebaluliwe uma kusinwa ijadu ungagqoka ngendlela ejwayelekile noma uvunule kodwa ayikho impoqo kuloko.
Ziningi izindlela abantu abamnyama abazithokozisa ngazo uma beneme noma besemicimbini yesintu njengemishado. Ukuhlabelela nokusina noma ukushaya indlamu yizindlela ezisetshenziswa kakhulu. Abesilisa nabesifazane bayabayingxenye yalokhu kodwa indlamu ishaywa ngabesilisa kuphela.